Solemar Sicilia-Casa Maria-Sole
UThomas unezimvo eziyi-84 zezinye iindawo.
ICasa Maria ime nje kwenye yeendlela eziphambili kwiziko lembali laseSanta Flavia, idolophu encinci kodwa edlamkileyo ngaphandle kwePalermo, ikomkhulu laseSicily.
Ngaba uyafuna ukubaleka imigibe yabakhenkethi kwaye ufumane incinci yeSicily yokwenyani? Ngaphandle kokuncama ithuba lokuqubha elwandle xa uziva uthanda? I-Santa Flavia luluntu lwenyani nolungachithwanga kumgama oluncedo kakhulu weyona ndawo ibalulekileyo yedolophu yesiqithi.
ICasa Maria sisiseko esifanelekileyo sokuhlala kwakho eSicily. Ezi zindlu ziyilwe kakuhle kwaye zinefenitshala entle zikwindawo yokuphosa ilitye ukusuka kwindlela ephambili yaseSanta Flavia, apho uya kufumana zonke iibhakary, iibhari, kunye (ewe!) iipizzeria oya kuzifuna ukuhlala utyiswa kwaye unkcenkceshelwa! Ivenkile encinci, iivenkile ezininzi zeziqhamo nemifuno kunye nevenkile ethengisa inyama zigqibezela lo mfanekiso. Umgama nje oyi-500m ukusuka kwisikhululo esiphakathi, oololiwe abaqhelekileyo baya kukusa embindini wePalermo ngaphantsi kwemizuzu elishumi elinesihlanu.
ICasa Maria ikwiSanta Flavia, ilali esele ikhululekile kukhenketho oluninzi, nje imizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka elwandle. ICasa Maria sisiseko esifanelekileyo sezibini kunye nabahambi abazimeleyo abafuna ukufumana eyona Sicily yokwenyani. Enkosi kwisikhululo sikaloliwe umganyana nje ukusuka ehotele, unokufikelela kumbindi wePalermo ngemizuzu nje embalwa
ISanta Flavia yindawo entle apho unokonwabela bonke ubuncwane obumangalisayo beSicliy. Ulwandle lufikeleleka lula eCasa Maria ngeenyawo. Unokuhamba uye kwiilali zokuloba ezingagqwekiyo zasePorticello naseSant Elia.
Siya kuhlala sisenza konke okusemandleni ethu ukunceda ngayo nayiphi na imibuzo okanye izicelo onokuthi unazo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santa Flavia